Maxkamadda CQS oo dil ku xukuntay askari dilay laba qof oo shacab ah | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxkamadda CQS oo dil ku xukuntay askari dilay laba qof oo shacab...
Maxkamadda CQS oo dil ku xukuntay askari dilay laba qof oo shacab ah
Muqdisho (Halqaran.com) – Maxkamadda Ciidanka Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa Khamiistii maanta waxaa ay xukun dil ah ku riday askari ka tirsan Ciidamada Booliska Saldhiga Degmada Boondhere, kaas oo 24-Kii bishii April xilli habeen ah Magaalada Muqdisho ku dilay laba qof oo Shacab ah.
Dhageysiga dhacwadan oo soo martay heerar kala ayaa ugu dambeyn Khamiistii maanta waxa ay gaartay maxkamadda qalabka sida go’aan.
Guddoomiyaha Maxkamadda Darajada 1aad ee Ciidamada Qalabka Sida, Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sheegay marqaatiyaal iyo cadeymo la horkeenay maxkamadda kadib, inay ku cadaatay dilka uu gaystay askarigan, waxaana Maxkamadda ay ku xukuntay dil toogasho.
Xukunka lagu riday askarigan ayaa waxaa uga furan racfaan muddo bil ah, sida uu ku dhawaaqay Guddoomiyaha Maxkamadda.
Si kastaba, askariga maanta la xukumay ayaa labadii ruux ee uu horay u dilay waxaa ka dhashay dilkoodii Banaanbaxyo sababay in la jeex jeexo Sawirka Madaxweynaha JFS & in dad careysan ay kiciyaan Banaanbaxyo rabshado watay oo ka dhacay magaalada Muqdisho.
Askari dilay dad shacab ah
maxkamadda qalabka sida